Fahatakarana ny dokam-barotra amin'ny programa, ny fironany ary ny mpitarika ny teknolojia doka | Martech Zone
Fahatakarana ny dokam-barotra amin'ny programa, ny fironany ary ny mpitarika ny teknolojia doka
Talata, Martsa 29, 2022 Talata, Martsa 29, 2022 Douglas Karr
Nandritra ny am-polony taona maro, ny dokam-barotra amin'ny Internet dia somary tsy mitovy. Nisafidy ny hanolotra ny toera-dokany manokana ho an'ny mpanao dokam-barotra ny mpanonta na nampiditra trano doka ho an'ny tsenan-doka mba hanolorana sy hividianana azy ireo. On Martech Zone, mampiasa ny trano fanaovana dokambarotra toy izao izahay… mampiasa Google Adsense hamatsy vola ireo lahatsoratra sy pejy misy doka mifandraika ary koa mampiditra rohy mivantana sy mampiseho doka miaraka amin'ireo mpiara-miasa sy mpanohana.
Ny mpanao dokam-barotra dia nitantana ny teti-bolany, ny tolony, ary ny fikarohana ny mpanonta sahaza handraisana anjara sy hanao dokambarotra. Tsy maintsy nitsapa sy nitantana ny tsena tiany hidirana ny mpitory. Ary, miankina amin'ny haben'ny mpihaino azy, dia mety ekena izy ireo na tsia. Nandroso ny rafitra nandritra ny folo taona farany, na izany aza. Satria nihatsara be ny bandwidth, ny herin'ny informatika ary ny fahombiazan'ny angona, dia lasa mandeha ho azy tsara kokoa ny rafitra. Ny mpanao dokam-barotra dia niditra tao amin'ny sahan'ny tolo-bidy sy ny teti-bola, nitantana ny lisitra sy ny tolo-bidy ny fifanakalozam-barotra, ary ny mpanonta dia nametraka ny mari-pamantarana ho an'ny tranony doka.
Inona ny dokam-barotra amin'ny programa?
Ny fepetra Haino aman-jery fandaharana (Fantatra koa amin'ny hoe marketing amin'ny programa or dokambarotra fandaharana) dia mirakitra teknolojia maromaro izay manara-penitra ny fividianana, fametrahana ary fanatsarana ny fitahirizam-baovao, ary manolo ny fomba mifototra amin'ny olombelona. Amin'ity dingana ity, ny mpiara-miombon'antoka amin'ny famatsiana sy ny fangatahana dia mampiasa rafitra mandeha ho azy sy fitsipika momba ny fandraharahana mba hametrahana doka ao amin'ny lisitry ny haino aman-jery lasibatra elektronika. Misy soso-kevitra fa ny haino aman-jery programmatika dia tranga mitombo haingana amin'ny indostrian'ny haino aman-jery sy dokam-barotra manerantany.
Fitaovana dokam-barotra amin'ny programa
Misy antoko maromaro mandray anjara amin'ny dokam-barotra programa:
mpanao dokam-barotra - Ny mpanao dokam-barotra dia ny marika te hanatratra mpihaino kendrena manokana mifototra amin'ny fitondran-tena, demografika, fahalianana, na faritra.
Mpanonta – Ny mpanonta no mpamatsy ny doka fananan-tany na pejy toerana haleha izay azo adika ny atiny ary azo ampidirina amin'ny fomba mavitrika ny doka kendrena.
Sehatry ny lafiny famatsiana - The SSP Manondro ny pejin'ny mpamoaka, atiny, ary faritra doka izay azo hanaovana tolo-bidy.
Takelaka misy takelaka - The DSP Manondro ny doka, ny mpihaino kendrena, ny tolo-bidy ary ny tetibola ataon'ny mpanao dokambarotra.
Ad Exchange – Ny fifanakalozam-barotra dia mifampiraharaha sy mampanambady ny doka amin'ny trano sahaza mba hampitomboana ny fiverenan'ny dokambarotra amin'ny fandaniana doka (ROAS).
Tolotra ara-potoana - RTB dia ny fomba sy ny teknôlôjia izay anangonana, novidina ary namidy ny lisitry ny dokam-barotra isaky ny sary.
Fanampin'izany, ireo sehatra ireo dia matetika ampidirina ho an'ny mpanao dokambarotra lehibe kokoa:
Sehatra fitantanana data - Fanampiana vaovao kokoa amin'ny habaka dokam-barotra programa dia ny DMP, Sehatra iray manambatra ny angon'ny antoko voalohany an'ny mpanao dokam-barotra momba ny mpihaino (kaonty, serivisy mpanjifa, CRM, sns.) sy/na angona avy amin'ny antoko fahatelo (fitondran-tena, demografika, jeografika) mba hahafahanao mikendry azy ireo amin'ny fomba mahomby kokoa.
Sehatra ho an'ny mpanjifa - The CDP dia angon-drakitra mpanjifa afovoany, maharitra, mitambatra izay azon'ny rafitra hafa idirana. Ny angona dia sintonina avy amin'ny loharano maro, nodiovina ary natambatra mba hamoronana mombamomba ny mpanjifa tokana (fantatra ihany koa amin'ny hoe fomba fijery 360 degre). Ity angona ity dia azo ampifandraisina amin'ny rafitra dokam-barotra programmatika mba hanamafisana kokoa ny fizarana sy hikendry mpanjifa mifototra amin'ny fitondran-tenany.
Ny dokam-barotra amin'ny programa dia tonga amin'ny taonany amin'ny fampidirana ny fianarana milina sy ny faharanitan-tsaina (AI) mba hanara-dalàna sy hanombantombana ny angona voarafitra mifandray amin'ny tanjona sy ny angona tsy voarindra mifandraika amin'ny fananan'ny mpamoaka mba hamantarana ny mpanao dokambarotra tsara indrindra amin'ny tolo-bidy tsara indrindra tsy misy fitsabahan'ny tanana sy amin'ny hafainganam-pandeha tena izy.
Inona no tombony azo amin'ny dokam-barotra amin'ny programa?
Ankoatra ny fampihenana ny mpiasa ilaina amin'ny fifampiraharahana sy fametrahana doka, dia mahasoa ihany koa ny dokam-barotra amin'ny programa satria:
Manombatombana, manadihady, manao fitiliana ary mamokatra tanjona mifototra amin'ny angona rehetra.
Ahena ny fitiliana sy ny fako doka.
Nihatsara ny fiverenana amin'ny fandaniana doka.
Fahaizana manenjana avy hatrany ny fanentanana mifototra amin'ny tratra na tetibola.
Nohatsaraina ny tanjona sy ny fanatsarana.
Afaka manao vola avy hatrany ny mpamoaka ny atiny ary mahazo taham-bola ambony kokoa amin'ny atiny ankehitriny.
Fironana dokam-barotra fandaharana
Misy fironana maromaro izay mitondra fitomboana isa roa amin'ny fandraisana ny dokam-barotra programa:
Privacy - Ny fitomboan'ny fanakanana doka sy ny fampihenana ny angon-drakitra cookie avy amin'ny antoko fahatelo dia mitondra fanavaozana amin'ny fisamborana ny fitondran-tenan'ny mpampiasa amin'ny mpihaino kendrena tadiavin'ny mpanao dokam-barotra.
Television – Manokatra ny toerana fanaovana doka ho an'ny dokam-barotra voarindra ny tambajotran-tariby mahazatra.
Digital tsy an-trano - DOOH dia takela-by, fampirantiana, ary efijery hafa izay hita any ivelan'ny trano nefa lasa azon'ny mpanao dokambarotra amin'ny alàlan'ny sehatra fitakiana.
Audio ivelan'ny trano - AOOH dia tambajotram-peo mifandray izay any ivelan'ny trano fa lasa azon'ny mpanao dokambarotra amin'ny alàlan'ny sehatra fitakiana.
Audio Ads - Ny sehatra Podcasting sy mozika dia manome ny sehatra ho an'ny mpanao dokam-barotra amin'ny programa misy doka audio.
Dynamic Creative Optimization - DCO dia teknôlôjia izay anaovana fitiliana sy famoronana doka aseho amin'ny fomba mavitrika – ao anatin'izany ny sary, ny fandefasana hafatra, sns.
andian-tsoratra Chain – Na dia teknolojia tanora aza ny informatika, blockchain dia manantena ny hanatsara ny fanaraha-maso sy hampihenana ny hosoka mifandray amin'ny dokam-barotra nomerika.
Inona avy ireo sehatra fandaharana ambony indrindra ho an'ny mpanao dokam-barotra?
Araka ny Gartner, ireo sehatra fandaharana ambony indrindra ao amin'ny Ad Tech dia.
Ahitsio FLOW - Any Eoropa ary mifantoka amin'ny tsena Eoropeana, Adform dia manolotra vahaolana amin'ny lafiny fividianana sy fivarotana ary manana fifandraisana mivantana amin'ny mpanonta.
Adobe Advertising Cloud - miompana betsaka amin'ny fampivondronana DSP ary DMP fampiasa miaraka amin'ny fikarohana sy singa hafa amin'ny stack martech, ao anatin'izany ny sehatra data mpanjifa (CDP), famakafakana amin'ny tranonkala sy tatitra iraisana.
Amazon Advertising - nifantoka tamin'ny fanomezana loharanom-baovao iraisana ho an'ny tolo-bidy amin'ny famoriam-bola manokana an'ny Amazon sy miasa ary koa ny famoriam-bola avy amin'ny antoko fahatelo amin'ny alàlan'ny fifanakalozana misokatra sy fifandraisana mivantana amin'ny mpamoaka lahatsoratra.
amobee - Mifantoka betsaka amin'ny dokam-barotra mifamatotra manerana ny fahitalavitra, ny fantsona nomerika ary ny sosialy, manome fidirana mitambatra amin'ny TV linear sy streaming, fanisana ary tsenam-bidin'ny programa amin'ny fotoana tena izy.
Base Technologies (Centro taloha) - ny vokatra DSP dia mifantoka amin'ny fandrindrana ny haino aman-jery sy ny fanatanterahana ny asa amin'ny fantsona sy ny karazana fifanarahana.
Criteo – Criteo Advertising dia manohy mifantoka amin'ny varotra fampisehoana sy ny retargeting, ary manamafy ny vahaolana feno ho an'ny mpivarotra sy ny haino aman-jery ara-barotra amin'ny alàlan'ny fampidirana eo amin'ny lafiny fividianana sy fivarotana.
Google Display & Video 360 (DV360) – Mifantoka betsaka amin'ny fantsona nomerika ity vokatra ity ary manome fidirana amin'ny programa manokana amin'ny fananana sasany an'ny Google sy miasa (oh, YouTube). DV360 dia ampahany amin'ny Google Marketing Platform.
MediaMath – Mifantoka betsaka amin'ny haino aman-jery fandaharana manerana ny fantsona sy ny endrika ny vokatra.
Mediaocean - Ny portfolio-n'ny vokatra amin'ny fitomboana dia miompana amin'ny fandrindrana ny haino aman-jery, ny fitantanana ny haino aman-jery ary ny lafiny fandrefesana media.
Ny birao momba ny varotra - mitantana omnicchannel, DSP-programmatika ihany.
Xandr - Ny vokatra dia mifantoka amin'ny fanomezana sehatra tsara indrindra ho an'ny haino aman-jery fandaharana sy fahitalavitra mifototra amin'ny mpihaino.
Yahoo! Ad Tech – manome fahafahana miditra amin'ny fifanakalozam-baovao misokatra sy ireo fananan'ny haino aman-jery be mpividy indrindra manerana an'i Yahoo!, Verizon Media ary AOL.
epom, DSP malaza, dia namorona ity infografika ity, The Anatomy of Programmatic Advertising:
Tags: fifanakalozana dokafiovanadokambarotra adobesehatra dokam-barotra adobesehatra mpanao dokam-barotradokam-barotrafamoronana teknolojiamanamafy ny fandehananaamobeeaudio ivelan'ny tranofanolorana mandeha ho azylehibeblockchaincdpfoibecriteoSehatra ho an'ny mpanjifasehatra fitantanana datadcosehatra lafiny fangatahanaHafanàm-po an dokam-barotranomerika ivelan'ny tranodmpdspdv360epomGoogle Display & Video 360sehatra marketing googlemediaoceandokambarotra fandaharanamarketing amin'ny programahaino aman-jery fandaharanampividy doka media sosialymividy doka amin'ny media sosialydoka amin'ny media sosialyfampahalalam-baovao sosialytahiry media sosialyssdsehatra lafiny famatsianany birao fivarotanadoka tvxandryieldr
Paikady SEO: Ahoana no ahazoanao ny laharan'ny orinasanao amin'ny fikarohana organika amin'ny 2022?
Kajy na anontanio ny halaviran'ny faribolana lehibe eo anelanelan'ny teboka amin'ny latitude sy ny latitude amin'ny fampiasana ny formula Haversine (Ohatra PHP, Python, MySQL, MSSQL)
Febroary 1, 2016 amin'ny 5:04 PM
Avy aiza ny Big Data izay hitondra ny dokam-barotra programa?
Febroary 1, 2016 amin'ny 8:01 PM
Peter, izany dia fitambaran'ny angon-drakitra momba ny fitondran-tena eo amin'ny pejy nalaina tamin'ny sehatra antoko fahatelo, angona demografika sy firmagraphic ivelan'ny tranokala, filaharana ara-tsosialy, tantaran'ny fikarohana, tantaran'ny fividianana ary saika loharano hafa. Ny sehatra programmatika lehibe indrindra izao dia mifamatotra ary afaka mamantatra ireo mpiserasera amin'ny tranokala ary na dia amin'ny fitaovana hafa aza!